राजनीतिक दलमा कलाकारको लर्कोः अवसरको लोभ कि सेवाभाव ? - Nepal Face
काठमाडौं । भारतमा मात्र देखिएको कलाकारहरु राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्ने र लाभ लिने घटना पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि देखिन थालेका छन् । भारतीय कलाकार स्मृति इरानी भाजपाको राजनीतिमा प्रवेश गरी पटक पटक केन्द्रीय मन्त्री भइसकिन् । उनी अहिले पनि बहालवाला मन्त्री हुन् । सुनिल दत्त, शत्रुघन सिन्हादेखि धेरै कलाकार भारतको राजनीतिमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सांसद भएका छन् ।
कलाकार सबैका साझा हुन् भन्ने मान्यता छ । तर त्यो मान्यता पछिल्ला दिनमा खण्डित हुँदै जान थालेको छ । पंचायतकालमा मण्डलेहरुको कृपाले रेडियोमा जागिर खाएकी गायिका कोमल ओलीलाई एमालेले पार्टीमा प्रवेश गराएर राष्ट्रियसभा सदस्य बनायो । भलै उनलाई राष्ट्रियसभामा लगिरहँदा एमालेमा दुःख गरेका र जेलनेल भोगेका थुप्रै महिलाको अवसर खोसिएको थियो ।
कोमल ओलीले अवसर पाएको देखेर नायिका करिस्मा मानन्धर पनि केही महिनाअघि एमालेमा प्रवेश गरिसकेकी छन् । करिस्मा मानन्धर डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टीको नेता पनि भइन् । तर नयाँशक्ति जसपामा बिलय भएपछि उनी पनि राजनीतिमा सक्रिय थिइनन् । तर कोमल ओलीले एमालेमा अवसर पाएको देखेर उनी पनि उक्त पार्टीमा निकै हौसला राखेर प्रवेश गरेकी छन् । नायिक रेखा थापा २०६५ ताका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग लालुपाते नुह्यो भुईतिर....गीतमा नाचेकोमा त्यही पार्टीको निकट भएको आरोप लाग्यो । तर उनी राप्रपाम लागेर महामन्त्रीकै उम्मेदवार भइसकेकी छन् । नायक निखिल उप्रेतीलाई त एमालेले सर्लाहीबाट २ पटक सांसदको टिकट दिई जिताइसकेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड, सांस्कृतिक संस्थानमा नियुक्तिको लोभमा पनि कतिपय कलाकार पार्टीमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनको स्थापनादेखि पंचायतकालसम्म महाप्रबन्धक रहेका नीर शाह नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध भएका छन् । उनलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने चर्चा चले पनि माओवादीको भागमा परेकाले उनी पर्न सकेनन् । नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भए । जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेका नीर शाहलाई सांसद हुने चौपट्टै इच्छा रहेको कुरा प्रधानमन्त्री देउवापत्नी डा. आरजु राणासमक्ष उनकी छोरी आकांक्ष शाहले पनि राखेकाले उनी मनोनीत हुने कुरा पक्का नै रहेको थियो । तर गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डामा त्यो माओवादीको भागमा परेकाले दाहाल सांसद भए ।
यद्यपि सांसद नै नभए पनि शाहले कांग्रेसमा कलाकारहरुलाई प्रवेश गराउँदैआएका छन् । आजमात्रै नायक भुवन केसी, अभिनेत्री श्वेता खड्का र कलाकार संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्का शाहकै पहलमा कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । भुवन केसी ४ बर्षअघि एमालेमा प्रवेश गरी काठमाडौं १ को सांसदमा उम्मेदवार हुने चर्चा पनि चलेको थियो । तर उनलाई टिकट नदिएपछि उनी एमालेमा सक्रिय थिएनन् । ४ बर्षपछि उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
# कोमल ओली